Ny adin’ny Haramagedôna
"Ireo dia hiady amin'ny Zanak'ondry, ary ny Zanak'ondry haharesy azy, satria Tompon'ny tompo sy Mpanjakan'ny mpanjaka Izy, ary haharesy azy koa izay momba Azy, dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky." - Apôk. 17:14.
Tokony hianarantsika ny amin'ny fanidinana ny lovia fahafito. Tsy hanaiky ho resy tsy miady tsy akory ny herin'ny ratsy. Anjara asa lehibe anefa no tanan'ny Fahasoavana ao amin'ny adin'i Haramagedôna. Rehefa hohazavain'ny voninahitry ny anjely resahin'ny Apôk. 18 ny tany, dia hifoha avy ao amin'ny faharendremany daholo ireo hery ara-pivavahana, ny tsara sy ny ratsy, ka ny tafik'llay Andriamanitra velona no hahazo ny laka.- SDABC, b. 7, t, 983.
Anjely efatra mahery no mihazona ny herin'ity tany ity mandra-pahavitan'ny tombokase eo amin'ny handrin'ireo mpanompon'Andriamanitra. Efa dodona mafy mihitsy ny firenena eto amin'izao tontolo izao ny hifanandrina, kanefa mbola ireo anjely ireo no mifehy azy. Rehefa esorina ireo hery mihazona ireo dia ho avy amin'izay ny fotoan-tsarotra sy ny fahoriana. Hisy fitaovam-piadiana hoenti-mamono amin'ny fomba mahatsiravina hoforonina. Maro amin'ireo sambo lehibe no hiaraka hilevina amin'ny manana aina ao anatiny any amin'ny farany lalina indrindra any. Ireo rehetra izay tsy manana ny fanahin'ny fahamarinana dia hivondrona eo ambany fitarihan'ireo fitaovan'i Satana, kanefa mbola ho voafehy ihany aloha izy ireo mandra-pahatongan'ny fotoana hahatongavan'ny ady lehiben'i Haramagedôna.- SDABC, b. 7, t. 967.
Miroborobo amin'ny asany ny endri-paharatsiana rehetra. Hanambatra ny heriny amin'ny an'olombelona ny anjely ratsy. Tao anatin'ny fifanandrinana tsy miato izy ireo no sady kinga tokoa amin'ny famitahana sy ny ady. Nandritra ny taonjato maro no nandavorariany izany toetra izany. Tsy hanaiky ho resy amin'izao izy ireo kanefa tsy hiady amin'ny ady lehibe farany. Tsy maintsy hanana ny ankolafy hiandaniany ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Hisy tokoa ny adin'i Haramagedôna. Aoka tsy hisy horendrehana isika amin'izany andro izany. Tokony hifoha isika, tahaka ireo virijina hendry, ka hanana diloilo ao amin'ny fanalantsika. (...)
Tsy maintsy manana ny Fanahy Masina isika, ary ny Kapitenin'ny anjelin'ny lanitra no hitarika ireo anjeliny ho amin'ny ady. Mbola hisy toe-javatra miezinezina hiseho eo anatrehantsika. Hampanenoana mifanesy ny trômpetra; kapoaka mifanesy no hiraraka amin'ny mponin'ny tany. Efa hianjera amin'ny tany ny toe-javatra mampivarahontsana.- SDABC, b. 7, t. 982